कसरी छनौट गर्ने टिकाउ जुत्ता-चप्पल ? « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
काठमाण्डौ ५ असोज केहि समय अघिसम्म पनि महिलाहरुले केवल आफ्नो पहिरनमा मात्र ध्यान दिन्थे । पहिरन फेसन अनुरुप लगाएपछि आफुलाई फेसनेवल भएको महशुस गर्थे । तर आज ती युवतीलाई फेसनेवल मानिन्छ, जसले पहिरन अनुसारको मेकअप तथा फुटवेयरको छनौट राम्रोसँग गर्छिन् ।
आजको दिनमा जति पहिरनलाई महत्व दिइन्छ, त्यति नै फुटवेयरलाई महत्व दिन आवश्यक छ । यद्यपि, फूटवेयर किन्नुभन्दा केही कुराहरुमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ । जस्तो यदि तपाईंको पहिरन आकर्षक छ, तपाईं सुन्दर देखिनु भएको छ भने त्यही अनुसारको फुटवेयर लगाएको हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो पहिरन र स्टाइल अनुसारको फुटवेयर छनोट गर्नु पर्छ ।
प्रायः होचो कदका युवतीहरुले आफूलाई अग्लो देखाउनका लागि अग्लो हिल भएका जुत्ता किनेको पाइन्छ, जुन सही होइन । तपाईंको उचाइ कम भए पनि, बढि भए पनि तपाईंले मध्यम हिल भएको फुटवेयर छनोट गर्नु पर्छ ।
जुत्ता-चप्पल किन्ने सबैभन्दा राम्रो समय कुन होला रु यो एउटा रमाइलो जिज्ञासा हुनसक्छ । फेसन पारखीहरुका अनुसार प्र्राय साँझको समय पारेर फुटवेयर किन्नु उचित हुन्छ । साँझपख खुट्टा सुन्निने भएकाले खुट्टाको साइजको उचित अनुमान लगाउन सकिन्छ, त्यही अनुसारको फुटवेयर किन्न सहज हुन्छ ।
ढाड दुख्ने तथा पैताला दुख्ने समस्या छ भने तपाईंले अग्लो हिल भएका फुटवेयर हेर्दै नहेर्दा ठिक हुन्छ । अग्लो हिल भएका फुटवेयरमा शरीरको तौलको दवाव पैतालाको अघिल्लो भागमा पर्ने भएकाले मोटा व्यक्तिले पनि अग्लो हिल भएका फुटवेयर छनोट गर्नु हुँदैन । यदि तपाईंलाई घुँडा दुख्ने समस्या छ भने हल्का हिल भएको फुटवेयर उपयुक्त हुन्छ । त्यसले पैतालाको अघिल्लो भागको तनाव समेत कम गर्छ ।
फुटवेयर लगाउँदा तपाईंको औंलाही एक(अर्कामा खप्टिनु हुँदैन, दुई वटा औंलाको बीचमा केही दुरी कायम रहनु पर्छ । सधैं फ्ल्याट फुटवेयर लगाउने गर्नु भएको छ भने कहिलेकाहिं हल्का हिल भएको फुटवेयर पनि लगाउने बानी बसाल्नु पर्छ । फुटवेयर किन्दा जहिले पनि गुणस्तीयर तथा ब्रँण्डेड कम्पनिको मात्र किन्नु पर्छ ।
तपाईंले लगाइरहनु भएको जुत्ता अथवा चप्पल च्यातियो भने एक-दुई पटक सिलाएर लगाउनु त ठिकै हो, तर पटक(पटक सिलाएर लगाउनु भयो त्यो राम्रो देखिंदैन । पटक-पटक सिलाएर लगाउँदा खुट्टालाई पनि असहज हुन सक्छ ।
फुटवेयर आफ्नो खुट्टालाई सुहाउने आकारको हुनु पर्दछ । अर्को कुरा उक्त फुटवेयर लचिलो हुनु पनि आवश्यक छ । रेक्सिन तथा प्लास्टिकबाट बनेका फुटवेयर सकेसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्ता फुटवेयरले खुट्टा गुम्सिने सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईं छालाका जुत्ता अथवा चप्पल प्रयोग गर्नु हुन्छ भने तीनलाई नियमित पोलिस गर्नु पर्छ । धेरै समयसम्म जुत्ता लगाउँदा तपाईंको खुट्टा गन्हाउने समस्या छ भने क्लोज शू लगाउनु हुँदैन । यदि तपाईंमा त्यस्तो समस्या छ भने तपाईंले ओपन शूज नै छनोट गर्नु पर्छ ।
फुटवेयरको भित्री भाग (तलुवा) नरम हुनुपर्छ । खुट्टाको पैताला पर्ने भाग नरम हुन अनिवार्य छ । फुटवेयरको गोलीगाँठोनिरको भाग बलियो हुनुपर्छ । जुत्ता लगाउँदा त्यसले गोलीगाँठोलाई कसिलो पारेको अनुभव गराउने हुनुपर्छ । यदि तपाईंले फ्ल्याट चप्पल किन्ने निर्णय गर्नु भएको छ भने त्यसलाई एक पटक हल्का हातले दोबार्ने प्रयास गर्नु होला । सहर्ज दोब्रिने तथा नदोब्रिने दुबै प्रकारका चप्पल राम्रो मानिंदैन ।
तपाईंको खुट्टा भद्दा देखिन्छ भने हल्का हिल भएको फुटवेयर लगाउनु पर्छ । यसका साथै सकेसम्म खुट्टा नदेखिने तथा अँध्यारो रंगका फुटवेयर छनोट गर्नु पर्छ । तपाईंले रंगीन पहिरन लगाउनु भएको छ भने साधारण जुत्ता-चप्पल लगाउनु पर्छ । जाडो मौसममा जुत्तसंग मोजा लगाउन बिर्सन हुँदैन, तर चप्पलमा मोजा लगाउँदा चाहिं खासै सुहाउँदैन ।
स्टाइलिस जुत्ता-चप्पलसंग बाक्ला मोजा सुहाउँदैन, तीसँग पातला मोजा लगाउनु पर्छ । यदि तपाईं कामकाजी हुनुहुन्छ भने आफ्ना अफिसको भुईं अनुसारको फुटवेयर छनोट गर्नु पर्छ । जुत्ता लगाउने व्यक्तिले खुट्टाका औंलाहरुको नङ बेला-बेलामा छोट्याइरहनु पर्छ ।
अन्त्यमा, जुत्ता-चप्पल किन्नका लागि धेरै भिडभाड भएको बेलामा नभइ पसल खालि(खालि भएको बेला किन्नु पर्छ । हतारमा जुत्ता-चप्पल किन्नु भनेको पुनः दोहोर्‍यार त्यहाँ जार्नु पर्ने बाध्यता निम्त्याउनु हो । त्यसैले जुत्ता(चप्पल किन्दा समय, अवसर र वातावरणलाई पनि विचार गर्नु पर्छ ।